Gaas oo isku shaandheeyay Agaasime Waaxeedyada maaliyadaha [Sababta]
GAROOWE, Puntland- Madaxweynaha Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta isku shaandhayn ku sameeyay Agaasimayaashii Maamulka iyo Maaliyadaha ee wasaaradaha dowladda.
Wareegto kasoo baxday xafiiska Madaxweyne Gaas maanta oo Khamiis ah ayaa la isku badalay 15 agaasime waaxeed oo ka howlgali jiray xafiisyada wasaaradaha dowladda.
Tallaabadan ayaa Madaxweyne Gaas qaaday muddo ku dhow 5 sano oo uu xafiiska joogay iyadoo waliba ay iska soo daba dhacayeen eedaymo la xariira musuq-maasuq lagu eedaynayo xafiisyada ugu sareeya dowladda.
Isku shaandhayntan ayaa loo aanaynayaa in Madaxweyne Gaas u qaaday eedayntii dhawaan loo soo jeediyay wasiirka Maaliyadda Puntland oo la sheegay inuu lunsaday lacag tiro badan.
Xisaabiyihii wasaaradda Maaliyadda ee gobolka Mudug Barkhad Aadan Muuse wuxuu sheegay in lacago badan lagu lunsado sifo sharci darro ah taasina ay keento in ciidamada iyo shaqaalaha dowladdu waayaan xuquuqdoodii. Halkan ka Akhri
Laakiin wasiirka Maaliyadda ayaa arrintaas iska difaacay oo sheegay in xisaabiyaha laftiisu lacag badan lunsaday. Halkan ka Akhri
Lama oga waxa ay ka badali doonto isku shaandhayntan musuq-maasuqa baahsan ee ka jira xafiisyada dowladda.
Hoos ka Akhriso Wareegtada la isugu shaandheeyay Agaasime Waaxeedyada maamulka iyo maaliyadaha ee Wasaaradaha Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 28 June 2018 xafiiskiisa kasoo saaray wareegto isku shaandhayn Agaasime waaxeedyada maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddaha.
Puntland: Dhul iyo Guryo dowladdu leedahay oo Galkacyo lagu iibiyay
Puntland 04.12.2017. 10:11
Maamulka gobolka Mudug oo kaashanaya degmada Galkacyo ayaa iibiyay dhul iyo dhismayaal ..
Puntland: 11 ku dhimatay dagaal ka dhacay gobolka Mudug
Puntland 26.10.2017. 21:43
Beesha Caalamka oo dedaal ugu jirta baajinta dagaal dhex mara Puntland iyo Somaliland
Puntland 04.07.2018. 20:35
Puntland 16.04.2018. 23:54